Soo -saareyaasha Xidhmada Xidhmada iyo Soo -saaraha Qalabka Roob -ka -Goynta Biyaha Roobka - Dhuumaha Vinyl
Muuqaal Range Soo dejiso Katalog
Soo -saaraha Xidhmada Goosashada Biyaha Roobka
Waxaa jira tiro ka mid ah xirmooyinka biyaha roobka oo laga heli karo soo -saarayaasha iyo rakibayaasha, laga bilaabo haamaha yaryar ilaa kuwa waaweyn. Haddii aad aqoon u leedahay markaa waa suurtogal inaad adigu rakibto nidaamka, laakiin waa lacag inaad ogaato waxaad raadineyso.
Xirmooyinka Goosashada Biyaha Roobka Hoosta iyo Dhulka Sare
Waxaad dooran kartaa mid fadhiya dhulka korkiisa oo ku yaal dhinaca guriga ama dhismaha ama mid ku aasan beerta. Haddii aad dooranayso mid ka hooseysa dhulka waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso qiimaha qodista iyo rakibidda. Haddii aad dooratid xirmo goosashada biyaha roobka oo cufan, ama isku -dhafan, markaa waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato haddii meesha sare ee saqafkaaga ama saqafku ay qaadi karaan culeyska haanta buuxda.
Vinyl waxay bixisaa labada nooc ee Xidhmada Goosashada Biyaha Roobka.
Sifooyinka Nidaamka Goosashada Biyaha Roobka
Waxaa loogu talagalay cabbirka saqafka ugu badnaan 800 mitir oo laba jibbaaran
Ku rakibidda mashiinka tijaabada ah ama ka soo horjeeda derbiga meelaha dhaxan laga ilaaliyo
La heli karo oo horay loogu rakibay mashiinka tijaabada ah
Nidaamka nadiifinta laba tallaabo oo ka madax bannaan heerka socodka oo hubinaya hufnaanta shaandhaynta sare.
Goobta kartridda shaandhaynta waxay caawisaa qaadista wasakhda oo joogto ah
Ku habboon 110mm (4 ") iyo 160mm (6") tuubooyinka hoos.
Miisaanka qaybta shaandhaynta 16 kg
Siphon ayaa buux dhaafiyey marin -biyoodka soo jiidashada leh
Tuubbada buuxdhaafi doonta ee Siphon si ay ugu haboonaato godka 130 mm ee gidaarka haanta kaydinta
Gelitaanka xasiloonida si looga hortago in biyaha soo socdaa ay carqaladeeyaan meel kasta oo taangiga ku jirta
Gelitaanka xasilan wuxuu kaloo hubiyaa in biyo macaan la siiyo aagga hoose ee haanta taasoo keentay in si buuxda oo joogto ah loo buuxiyo biyaha kaydsan